Kuunza mota kubva kuGreece kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kuunza mota kubva kuGreek kuenda kuUK
Kuwana mota yako kuUnited Kingdom kubva kuGreece
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuGreece dzatova muUnited Kingdom. Nekudaro, kana iwe uchida chekufambisa usazeze kutaura muchikumbiro chako chekutora kuti iwe unoda isu kuti titore mota. Dzese mota dzakazara inishuwarenzi panguva yekufamba kwavo kuenda kuUnited Kingdom uye isu tinochengeta zvese zvetsika zvekupinda mapepa uye kuronga zvese zvekutakura zvichiita nyore kuita kupinza mota yako.
Paunenge uchipinza mota kubva kuGirisi kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero pasina kupa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuGreek kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neshure mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Dzinopfuura gumi-makore-makore mota uye zvekare zviri mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kunatsurudzwa usati wanyoresa. Izvo zvinogadziriswa zvinoenderana nezera asi zvinowanzo kuve kumwenje uye kumashure kwemambure emwenje. Mota dzinopfuura makore makumi mana ekuberekwa hadzidi kuongorora kweMOT uye nekudaro tinogona kuzvinyoresa kure newe.
Sezvo isu takabudirira kukumbira vatengi vedu kuti vakwanise kuwana yedu pachedu Yangu Car Car yakazvitsaurira DVLA Akaunti Manager, pakupasa chikamu chekuyedza, kunyoreswa kunogona kubvumidzwa nekukurumidza zvakanyanya kuve nechokwadi chekuti kunyoreswa kwemotokari kwechiGreek kunokurumidza kupfuura dzimwe nzira.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kupinza mota kubva kuGreek kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe pamusoro pechipo chedu, taura nesu nhasi pa + 44 (0) 1332 81 0442.
Isu tinopa iyo yakazara yekusevhisa sevhisi kune echiGreek mota
Yakazara inishuwarenzi kutakura kuenda kunzvimbo yedu kubva kuGreece.
Zvakakosha kuti mota yako yechiGreek ive UK nzira yakanyoreswa.
MHANDO DZEMOTO DZEFRENCH